असाधारण अभियोजन भनेको के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki असाधारण परिशोधन
एक असाधारण अमरिकरण के हो?
शब्द र परिभाषा
साधारण पुनरावृत्ति भुक्तानी योजना अन्तर्गत ऋणको लागि सहमत हुनेछ। यस उद्देश्यको लागि, एक नियमित किस्त भुक्तानी निश्चित निश्चित अवधि भित्र सहमत हुन्छ। एक असाधारण चुकौती पूर्ति गरिएको भुक्तानी योजना मार्फत भुक्तानी को लागी भुक्तानी।
उधारो र विशेष व्यवस्था
जब ढाँचा सर्तहरू उधार्दा ऋण सम्झौताका सर्तहरू लाई सूचित गरिन्छ। समावेश समय र दर निर्दिष्टीकरणहरू हुन्। बिस्तारै बिस्तारै ऋण हटाउने गरिन्छ। समय तालिकामा परिवर्तनहरू जब कुनै पनि किस्त भुक्तानी छैन, परिवर्तन भुक्तानी बढाइयो वा घटाइयो, वा अचानक सम्पूर्ण ऋण भुक्तानको साथ प्रतिस्थापित हुन्छ। असाधारण परिशोधनले ऋणको कुल भुक्तानीको परिणाम हुन सक्छ ताकि ठेक्काको वास्तविक मिति भन्दा अघि पूरा भयो। पूर्ण प्रतिस्थापनको साथ, उधारकर्ताले अन्ततः पर्याप्त लागतबाट मुक्त गर्न सक्दछ। बैंकहरूले यी खरिदहरूमा कमाई, जुन समयको साथमा उचित भुक्तानी भएको हुन्छ।
व्यापारको हानि विरुद्ध आफूलाई आफूलाई सुरक्षित राख्न बैंकले प्राय: पूर्वभुगतानको दण्ड सहमत गर्दछन्, ऋणलाई समयमै पुरातन भुक्तान गरेर भुक्तानी गर्नुपर्छ। हरेक पुन र त्यसपछि विशेष भुक्तानीको लागि अधिकतम भुक्तान सीमाहरू पनि सहमत छन्। यी नियमहरूले बैंकिङलाई अझ राम्रो भविष्यवाणी बनाउन सजिलो बनाउँछ। यी कारणहरूको लागि, असाधारण पुनरावृत्ति पनि प्राय विशेष भुक्तानी भनिन्छ किनभने यो सहमतिमा रकम फिर्ता रकम बाहिर जान्छ। यदि कुल दायित्व अनावश्यक पुनर्जन्मको साथ तिरेको छ भने, यो भुक्तानी पनि क्रेडिट पुनर्जन्म भनिन्छ।
संशोधन नियमहरू ऋणको प्रकारमा निर्भर हुन्छन्
उदाहरणका लागि उपभोक्ता क्रेडिट सम्झौताको लागि रियल स्टेट लोन सम्झौताको तुलनामा अन्य क्रेडिट नियमहरू छन्। यसरी, उपभोक्ता क्रेडिट सम्झौताको एक विशेष पुनरावृत्ति सामान्यतया सधै सम्भव छ। तथापि, तथापि, मुआवजा सामान्यतया बैंकमा खसेको छ, जुन बैंकको व्यापार विफलता को हिसाब गर्ने उद्देश्य हो।
अचल सम्पत्ति ऋणको लागि, यदि कुनै निश्चित ब्याज अवधिमा सहमति भएको छैन भने असाधारण पुनरावृत्ति सम्भव छ। विशेष भुक्तानीका लागि, प्राय: क्रेडिट सम्झौतामा विशेष सम्झौताहरू छन्, जुन निश्चित अवधिमा निश्चित रकम सेट गरिएको छ। एक विशेष भुक्तानी पछि स्थापनाको कमी कम गर्न वा शब्द छोटो हुन सक्छ। यदि एक नयाँ उधारोको ब्याज घटाइएको छ भने एक पूर्ण पूर्ण भुक्तान फायदेमंद छ र उधारकर्ता नयाँ उधारोबाट अझ राम्रो छ।
नकदमा अप्रत्याशित वृद्धिको घटनामा, उदाहरणका लागि अप्रत्याशित बोनस भुक्तानीको परिणामको रूपमा, छुटको साथ ऋणको असाधारण पुनरावृत्ति धेरै उपयोगी हुन सक्छ। यसले उधारकर्तालाई नयाँ योजनाहरू सुरु गर्न फेरि फेरि फेरि अर्को पटक दिन्छ। यदि उधारको लागि ब्याज दर तुलनात्मक रूपमा घटाइयो भने, उधारकर्ताले अझ राम्रो नियममा नयाँ ऋण उधार लिन र पैसा बचत गर्न सक्छ। अन्ततः, ऋण को पूर्ण पुनरावृत्ति को संभावना यसको नियम संग समाप्ति अनुबंध मा निर्भर गर्दछ।
साथै बैंकको मुआवजा भुक्तानीलाई विचार गर्न सकिन्छ। यदि पूर्ण ऋण चुकौतीको लागि पूर्व भुक्तानी दर्ता अत्यन्त उच्च छ भने, त्यसपछि गणित रूपमा सम्भव छ कि असाधारण पुनरावृत्तिको साथ पूर्ण ऋण पुनरावृत्ति सार्थक छैन। यहाँ, तुलनात्मक रूपमा, एक विशेष भुक्तानी सिफारिस गरिन्छ, जो ऋण को परिपक्वताको कमी वा दर कमी मा जान्छ। सबै विकल्पहरू भुक्तानी गर्नु अघि गणना गर्नु पर्छ। यदि असाधारण परिशोधन यसको लायक छैन, त्यसपछि यो एक राम्रो लगानी मा पैसा लगानी गर्न थप अर्थ बनाउन सक्छ। लागत र मुआवजाले अप्रत्याशित वृद्धि नगद नगद नगर्न सक्दैन।
अर्को लेखछुटकारा ऋण